Dzokororazve Edhisheni Timu | Recipe
Kudzokorora ndeye webhusaiti nezve yekubika mabikirwo akagadzirirwa vana. Dambudziko rakajairika kune vazhinji veamai nderekugadzirira menyu yezuva rega rega. Chii chandiri kubika nhasi? Ndinozviita sei vana vangu vanodya muriwo? Ndingaite sei kuti ndigadzirire a kudya kwakadzikama uye kune hutano kuvana vangu? Kuti apindure mubvunzo uyu nemimwe yakawanda, Recetín akazvarwa.
Zvese zvekubheka zviri pawebhusaiti yedu zvakagadzirwa nevapiki vanove nyanzvi mukudya kwevana, saka vabereki vane zvese zvivimbiso Kugadzirira kicheni ine hutano uye ine hutano. Kana iwe uchida kuve chikamu che ino webhusaiti uye kushambadza maerekisheni ako nesu, iwe unongofanirwa kudaro zadza fomu rinotevera uye isu tichazosangana newe nekukurumidza sezvazvinogona.
Iwe unoda kutsvaga timu yedu yevabiki? Zvakanaka, pano isu tinopa vese avo vari chikamu chechikwata panguva ino uye avo vakashanda pamwe nesu munguva yakapfuura.
Ndine degree rekushambadzira uye neruzhinji hukama. Ndinoda kubika, kutora mifananidzo uye kunakidzwa neangu madiki madiki mashanu. Muna Zvita 2011 ini nemhuri yangu takatamira kuParma (Italy). Pano ini ndichiri kugadzira ndiro dzeSpanish asi ini ndinogadzirawo zvakajairwa chikafu kubva munyika ino. Ndinovimba unofarira madhishi andinogadzira kumba, anogara akagadzirirwa kunakidzwa kwevadiki.
Ini ndiri akatendeka asingarambiki wekicheni uye kunyanya weiyo confectionery. Ndapedza makore mazhinji ndichikumikidza chikamu chenguva yangu kujekesa, kudzidza uye kunakidzwa nemaphikicha mazhinji. Ini ndiri amai vevana vaviri, mudzidzisi wekubika wevana uye ndinoda kutora mifananidzo, saka zvinogadzira musanganiswa wakanaka kwazvo kugadzirira madhishi akanakisa eRecipe.
Ini ndinofarira zvekubika, uye hunyanzvi hwangu madhiri. Ini ndinogadzira dzinonaka, idzo vana vasingakwanise kuramba nadzo. Iwe unoda here kuziva iwo mabikirwo? Ipapo inzwa wakasununguka kunditevera.
Ini ndakazvarwa muAsturias muna 1976. Ini ndiri zvishoma mugari wenyika uye ndinotakura mapikicha, zviyeuchidzo uye mabikirwo kubva pano neapo musutukezi yangu. Ini ndiri wemhuri mune iyo nguva huru, yakanaka neyakaipa, inopetenuka patafura, saka kubvira ndichiri mudiki kicheni yave iripo muhupenyu hwangu. Neichi chikonzero, ini ndinogadzirira mabikirwo kuitira kuti madiki akure aine hutano.
Ini ndinonzi Irene, ndakazvarwa muMadrid uye ndine rombo rakanaka rekuve amai vemwana wandinonamata neupengo uye anoda kudya, edza madhishi matsva nezvinonhuwira Kwemakore anopfuura gumi ndanga ndichinyora ndichinyora mumhando dzakasiyana dzegastronomic blogs, pakati pazvo, pasina mubvunzo, Thermorecetas.com inomira. Munyika ino yeku blogga ini ndawana nzvimbo inoshamisa iyo yakandibvumidza kusangana nevanhu vakuru uye kudzidza kusingaperi kwemaresipi uye manomano ekuita kudya kwemwanakomana wangu kuve kwakanyanya uye isu tese tinonakidzwa nekugadzirira uye kudya ndiro dzinonaka pamwechete.